ကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုတာ ကံအကျိုးပေးကောင်းလို့ပါလို့ လူအများကယူဆနေကြပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့မိဘတွေက မွေးလာရတာမျိုး၊ အသုံးတည့်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို တီထွင်ဖြစ်သွားခြင်းမျိုးတွေမှာ ကံကြောင့်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမဆိုအရာရာတိုင်းဟာ ကံကြောင့်ချည်းဖြစ်တယ်လို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ အကျင့်စရိုက်အလေ့အထတွေမရှိရင်ရထားတဲ့ဓနဥစ္စာဟာ လွယ်လွယ်လေးနဲ့...
လူသားအရင်းအနှီး (Human Capital) တွင် လူတို့၏ ဘဝတလျှောက်စုဆောင်းထားသော ဗဟုသုတများ၊ ကျွမ်းကျင် မှုများနှင့် ကျန်းမာခြင်းတို့ပါဝင်ပြီး ယင်းတို့ဖြင့် မိမိတို့၏ စွမ်းရည်များကို သိနားလည်လာစေရန်၊ လူမှုဝန်းကျင်ရှိ လူသားများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်များကို ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေမည့် အကျိုးပြုသူများအဖြစ် ရပ် တည်လာနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အဆ...
Visits : 3866
My boss madeamistake onaproject we were working on and instead of owning his mistake, he said it was my fault. I sat through that meeting feeling shocked and disappointed. Although this happenedacouple of years ago. I remember the details quite well.When we left the meeting he told me, "You areagood sport.” I knew I needed to start planning...
Visits : 4453
Easy to say "Change" but difficult to do "Change"
Asaman was passing the elephants, he suddenly stopped, confused by the fact that these huge creatures were being held by onlyasmall rope tied to their front leg.&nbsp;There were no chains or cages. It was obvious that the elephants could, at anytime, break away from their bonds but for some reason, they did not.He sawatrainer nearby and asked...
Visits : 3441
55 - 60 of ( 73 ) records